Creative Writing » လူလိမ် သတိထားပါ (ကျမဒီလောက်မအပါ)	19
ဦးကြောင်ကြီး says: မားနိုခြံကို မီဝယ်ဘဲ ရအောင် လှုပ်ပြမဲ… ငှီး ငှီး ငှီး…။ မားနိုကိုယ်ဒိုင် လိုလိုလားလားနဲ့ တားကြောင်ကြီး ယူဆေစိုပီး လာဘ်ထဲ စာချုပ် ထိုးထည့်ဇေယျမဲ…. ငါကွ။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ကံကောင်း ညာဏ်ကောင်း လို့ပါလား မွမွနိုရေ။
Mike says: . သူ့ဖုံးကငွေကုန်ကာနီးနေလို့ ငွေလေးဖြည့်ပေးပါတဲ့…ဒုက္ခော
အောင် မိုးသူ says: ဧကန္တ ဖုန်းဘေလိုချင်လို့နဲ့ တူတယ်။ ဟီးးးးးးးးးး
aye.kk says: နိုနို
CharTooLan says: ဟိုတလောကလဲ သိန်း၅၀ကျော်ကံစမ်းမဲပေါက်တယ်ဆိုပီး ၁၁သိန်းလွဲခိုင်းတဲ့လိမ်နည်းတဲ့ ဖတ်လိုက်ရသေးတယ် ခုလဲတမျိုး နည်းကမျိုးစုံရယ် တနည်းသိ တနည်းမှတ်ရတာပေါ့ ကျေးကျေးပါ
Novy says: မှတ်လော့ ချာချာ
Alinsett @ Maung Thura says: အခုတလော… လိမ်တာတွေ… မတရားလုပ်တာတွေ…ခေတ်စားနေတယ်… မင်းဆိုးမင်းညစ်ခေတ်မို့….
Novy says: မောင်တူ၇ တီနို့ အစားသားပဲပြောလိုက်ပါကွယ်
တောင်ပေါ်သား says: ခြံဝယ်မယ့်သူက ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်ခိုင်းရတယ်လို့
Novy says: ကိုမျိုးရေ သူ့ တောင်ကျေးဇူးကျိတ်တင်နေရတယ်
Novy says: မားနိုကိုယ်ဒိုင် လိုလိုလားလားနဲ့ တားကြောင်ကြီး ယူဆေစိုပီး လာဘ်ထဲ စာချုပ် ထိုးထည့်ဇေယျမဲ…. ငါကွ။
Novy says: ဇီဇီရေ လိမ်နည်းပေါင်းကို စုံနေတာပါပဲတော်
Novy says: သူ့ဖုံးကငွေကုန်ကာနီးနေလို့ ငွေလေးဖြည့်ပေးပါတဲ့…ဒုက္ခော
Novy says: ဧကန္တ ဖုန်းဘေလိုချင်လို့နဲ့ တူတယ်။ ဟီးးးးးးးးးး
Novy says: မမအေးရေ .. အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရရင် နိုနိုတို့လည်း နေတိုင်းတော့ ငါးပါးသီလမမြဲပါဘူး
black chaw says: လေ့လာမှတ်သား သင်ခန်းစာယူသွားပါတယ် ဗျာ…။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: မနိုရေ